Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya oo soo gaaray magaalada Muqdisho - Jowhar Somali Leader
Home Somali Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya Fred Matiangi ayaa goor dhow ka degay garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho.
Booqashada Wasiirkan ayaa la sheegay inuu fariin uu ka wado Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta gaarsiiyo Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo.
Wararkan ayaa waxa ay sheegayaan in farriintan ay la xiriirto sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha xuduudaha iyo xiriirka labada dal oo muddooyinkii u dambeeyay mugdi sii galayay.
Jimcihii la soo dhaafay ayay aheyd markii Madaxweyne Farmaajo uu qadka taleefanka kula xiriiray dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta, iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal, sidii xiisada ka taagan xuduuda loo qaboojin lahaa.
Xiisada ka jirta xadka ayaa salka ku haysa Wasiirka Amniga Jubbaland iyo ciidamo uu wato oo gudaha u galay dalka Kenya kuwaasoo halis ku ah ciidamada dowlada federalka ay geysay magaalada Beled-Xaawo.
Dowlada Maraykanka ayaa cadaadis xoog leh saarayaysa labada dowladood sidii xal looga gaari lahaa khilaafka cusub ee sababay in ammaanka xadka uu xumaado.
Ra’iisul Wasaaraha UK Boris oo xaalad degdeg la geliyay iyo xaaladiisa oo ka sii dartay
Xasan Sheekh oo boggaadiyay dadaalada mideynta iyo dib u heshiisiinta Galmudug
Madaxda Mareykanka oo u diyaar garoobaya xaalladi ugu xumeyd ee dharbaaxada cudurka Covid 19.